Soo Iibso Kursiga Suunka Uurka - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Kursiga Ilmaha Uurka
$ 19.99 qiimaha joogtada ah $ 37.99
maraakiibta From Shiinaha Boqortooyada Ingiriiska United States Australia Spain Italy France Germany
Magaca Midabka Green Black White
Shiinaha / Cagaaran Boqortooyada Ingiriiska / Cagaar Mareykanka / Cagaar Australia / Cagaar Isbaanish / Cagaar Talyaaniga / Cagaar France / Green Shiinaha / Madoow Talyaaniga / Madow Jarmalka / Caddaan Faransiiska / Madoow Jarmalka / Cagaar Boqortooyada Ingiriiska / Caddaan Mareykanka / Caddaan Jarmalka / Madow Australia / Caddaan Isbaanish / Caddaan Talyaaniga / Caddaan Shiinaha / Caddaan Faransiiska / Caddaan Boqortooyada Ingiriiska / Madow Mareykanka / Madow Australia / Madoow Isbaanish / Madoow
Kursiga Uureysiga Suunka Uurka - Shiinaha / Cagaar gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Waxyaabaha: ABS + PPC
Nooca Item: Suumanka kuraasta & suufka
Miisaanka Item: 0.35kg
Width Item: 10cm
Magaca Model: YFAQD01
Shahaadada Imtixaanka Dibadda: ROHS
Color: Bla'aanta, Caddaan, Cagaaran
Dhererka suunka dhexda: ku saabsan mitirka 1.8
Moodooyinka lagu dabaqi karo: Universal ee dhammaan moodooyinka
Nooca: Naag Uur Leh Oo Wado Baabuur Amni Ah
Shahaadada Imtixaanka ee Dibadda: ROHS
Tasiilaadka: Raaxo iyo Nabdoonaanta Hooyooyinka Naasnuujinta ah, Ilaali Ilmaha aan dhalan, Haweeneyda Uurka Leh
Faafidda caloosha riix.
Si fudud ayaa loo dhejiyaa: Ku xir suumanka ku wareegsan kursiga muddo hal toddobaad ah si loo dhammeeyo rakibida! Habka rakibaadda ee sahlan oo dareensan, qof kasta ayaa si fudud u rakibi kara una saari kara.
Naqshadeynta xiisaha leh: Kaliya tixgeli shaqada sheyga laftiisa; waa yar yahay oo xiise leh; ma buuxsamo boos, si dabiici ah ayey ula dhexgali kartaa booska gudaha.
Kursiga suunka kursiga ee uurka ayaa kuxiran kursiga. Marka la rakibayo, fuulitaanka, iyo bixitaanka, ma jiri doonto dareen jidh qalaad; qalooca hore u fidiyey dharka ma xoqmi doono; waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida caadiga ah marka ay xiran tahay goonnada.
Dadka loo adeegsan karo: Alaabadani waxay ku habboon tahay dhammaan dumarka uurka leh, hooyada, qalitaanka caloosha, qalliinka caloosha, caloosha weyn, caloosha birta iyo wixii la mid ah.
Sida Dhalmadayada Car Belt Adjuster u shaqeyso:
Xajiyaha suunka garaaca ayaa ka dhigaya suunka meel ka sarreysa bowdyaha, bedelkii caloosha oo u horseedaya raaxo darro weyn oo ku saabsan kaadiheysta soo koraya. Waxay u oggolaanaysaa wadayaasha uurka leh inay diirada saaraan wadista gawaarida, sidoo kale waxay ka dhigaan rakaabka uurka leh raaxo iyo amaan. Suunka gaariga ee gaarigaaga wali wuu shaqeeyaa sida ay tahay xaaladdan oo kale.
Faa'iidooyinka Kursiga Mataanaha ee Belt Adjuster:
Qalabaynta suunka gaariga ayaa ka hor istaagaya suunka gaariga inuu ku dul fuulo kuuskuubka ilmahaaga si looga caawiyo ilaalinta hooyooyinka-noqonaya iyo canugga aan dhalan inta lagu jiro safarka gaariga. Waxyaabaha kale ee la midka ah waxay hoos u dhigayaan suunka kursiga laakiin wali caloosha ayey saaran yihiin
Badiba waxyaabaha la midka ah waxay yeelan karaan dabool / barkinta barkinta barkinta. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa shaqada kuleylka kuleylka ama hawo kursi
Way fududahay in aysan u qaadin waqti dheeri ah hooyooyinka uurka leh inay xirtaan oo ay dib u xirtaan mar kasta oo ay gaariga fuulayaan ama ka degayaan. Sidaa darteed, hagaajiyaha suunka gaariga uurka ayaa waxtar badan u leh isticmaalka maalin kasta. Uma baahnid inaad madaxaaga foorarsato si aad u eegto in lagu dhejiyo.
Xajiyaha suunka gaariga waxaa loogu talagalay haweenka 3 bilood isticmaala markay uurka leeyihiin ilaa waqtiga ilmuhu dhalanaayo.
Qof kasta oo lagu qalay caloosha ama caloosha, qalliinka kaadi mareenka, waxay kaa caawin kartaa yareynta raaxada iyo xanuunka si badbaado leh.
Haddii aad badaleyso kuraasta / gawaarida wax badan, (sida darawal ilaa rakaab, ama aad leedahay 2 gaari ama wax ka badan), waxaan kugula talineynaa inaad labo mar iibsato hal mar, marka uma baahnid inaad ka saarto & rakibto marwalba.